Filoha any Addis Abeba : “Tsy maintsy ampiana ny tanora mba hamokatra” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha any Addis Abeba : “Tsy maintsy ampiana ny tanora mba hamokatra”
Filoha any Addis Abeba : “Tsy maintsy ampiana ny tanora mba hamokatra”
04/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hisokatra anio. Tanterahina any Addis Abéba renivohitr’i Ethiopie, ny andiany faha-29 amin’ny fihaonana an-tampon’ny vondrona afrikanina. Mandray anjara mavitrika amin’izany isika Malagasy ary efa any an-toerana hatramin’ny alahady teo ny filoha Hery Rajaonarimampianina mivady sy ny delagasiona miara-dia aminy. « Haka tombony amin’ny fahamaroan’ny mponina ho fampivoarana ny tanora », no lohahevitr’ ity fihaonana ity izay efa novolavolaina tamin’ny fihaonana ny volana janoary ary manamafy ny fampandraisana anjara ny tanora, ny fandraisany andraikitra ary ny fitondrany ny anjara birikiny amin’ny dingana fampandrosoana. « Efa mipetraka ireo fanapahan-kevitra samihafa mahakasika izany fa ny fanatanterahana azy no hodinihina », araka ny fanazavana nentin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Fantatra fa ny fandraisana andraikitra ho an’ny tanora sy ny fanomezana azy ireo ny sehatra ahafahany mahaleo tena dia sehatra iray hanampy azy ireo ho mpitarika mandray anjara mavitrika eo amin’ny fiainam-bahoaka. « Betsaka ny fahasahiranana iainan’ny tanora toy ny fiofanana, ny fandriampahalemana… izay matetika manosika azy ireo hifindra monina na hiala ny fireneny mihintsy aza. Tsy maintsy hampiana ireo tanora mba hamokatra », hoy ny fanamarihany. Tanjona ny fampandraisana anjara ny tanora amin’ny fanatrarana ny tanjona napetraka ao amin ‘ny tetiandro 2063 ho an’i Afrika sy ny tetiandro 2030 ho an’ny fampandrosona maharitra ireo tanora ireo. Anisan’ny efa manao ezaka amin’izany ny Malagasy ary anisan’ny natsidiky ny filoham-pirenena amin’izany ny efa nametrahantsika paikadim-pirenena momba ny tanora sy ny fampandrosona azy ireo. « Manana endrika manokana amin’izany isika dia ny fisian’ireo tanora an’arivony maro hiasa sy ho mpandraharaha amin’ny sehatry ny fambolena ».
Ankoatra izay, anisan’ny hodinihina ao anatin’ity fihaonana an-tampony faha-29 ny vondrona afrikanina ity ihany koa ny lafiny ara-bola momba ny fihaonana sy ireo lafiny mahakasika ny fandriampahalemana sy ny filaminana ao anatin’ny kaontinanta afrikanina.
Etsy ankilan’izay, ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina, kosa dia handray anjara amin’ny fihaonan’ireo vadin’ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana hafa amin’ny fihaonana an-databatra boribory miainga amin’ny lohahevitra « Fiatrehana ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza, laharam-pahamehana aty Afrika ».
Efa be ny ezaka natao haseho ny firenena afrikanina hafa, efa nialoha lalana ny tanora amin’ny fanentanana ny tanora indrindra amin’ny ady atao amin’ny zava-mahadomelina, ny fanambadiana ary ny fiterahana aloha loatra…, tafiditra tsara amin’ny politika sy paikady apetraky ny firenena afrikanina.